Golaha Amaanka Oo La Filaayo Inuu Qaado Talaabo Ka Cadheysiin Doonta Dawlada Jabuuti – Ilays News
Golaha Amaanka Oo La Filaayo Inuu Qaado Talaabo Ka Cadheysiin Doonta Dawlada Jabuuti
New York (Ilays-News):- Golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa qorshaynaya in cunaqabatayna hubka laga qaado wadanka Eritrea ka dib markii uu Maraykanku hoos u dhigay in la sii dheereeyo cunaqabtaynta saaran dalkaasi, iyada oo heshiis nabadeed uu dhex maray Eritrea iyo Itoobiya.
Sidoo kale dawlada Britain ayaa warqad qoraal ah oo ay u gudbisay golaha amaanka waxay ku soo jeedisay in la qaado xayiraada hubka, mamnuucida safarada, hubka iyo cunaqabatayntanaha kale ee la saaray wadanka Eritrea sida ay baahisay wakaalada AFP.
Golaha amaanka ayaa la filayaa in 14 November uu cod u qaado qaraar la doonayo in cunaqabtaynta hubka lagaga qaado dalka Eritrea, waxaana la filayaa in goluhu uu aqbalo soo jeedinta Britain ka dib marka uu maraykanku isbadal ku sameeyo aragtidiisii uu hore u qabay.
Dawladaha Itoobiya iyo Eritrea ayaa bishii July ee sanadkan si wada jir ah u saxeexay heshiis nabadeed, iyada oo maraykankuna uu taageero u muujiyey halka wadamada Ingiriiska iyo faransiisku ay dawlada Eritrea ka dalbadeen inay dunida tusto horu marinta iyo xushmada ay u hayso xuquuqda aadanaha ka hor inta aan laga qaadin xayiraadaha saaran.
Dawlada Jabuuti ayaa iyadu hore uga soo hor jeesatey in cuno qabateynyta hubka laga qaado dawlada Eritrea , iyada oo ay u dhaxeyso colaad dhinaca xuduuda ah , hase ahaatee qaraarkan ayaa dawaldaha Eritrea iyo Jabuuti ku boorinaya in la sii wado wada hadalka labada dhinac u socda